Wararka Dibadda Archives - Page 2 of 24 - Ceelhuur Online
Home > Wararka Dibadda > Page 2
Category: Wararka Dibadda
Waa kuwee 4 Dal ee Afrika ee Shiinuhu doonayo inuu saldhig Milatari ka sameysto?
September 7, 2020 admin462
Dalka Shiinaha ayaa ka fekeraya inuu saldhig milatari ka sameysto afar dal oo Afrika ku yaalla, sida laga soo xigtay Waaxda Difaaca Mareykanka. Dalalka Kenya, Seychelles, Tanzania iyo Angola iyo kuwo kale ayaa la sheegay inuu Shiinuhu doonayo inuu xarun Milatari ka sameysto. Warbixinta oo ay waaxdu soo saartay toddobaadkii hore ayaa aad la iskula […]
Safiirkii Shiinaha u fadhiyay Israa’iil oo isagoo meyd ah laga helay gurigiisa
May 17, 2020 admin757
Safiirkii Shiinaha u fadhiyay Israa’iil oo isagoo meyd ah laga helay gurigiisa ku yaalla magaalada Tel Aviv, sida ay soo werisay warbaahinta Israa’iil. Mr Du, oo 58 sano jir ah ayaa waxaa meydkiisa laga helay sariirtiisa ilaa haatana lama oga sababta ka dambeysa dhimashadiisa. Waxa dalkaasi loo magacaabay bishii Febraayo ee sannadkan, waxa uu horay […]
In ka badan 20 askari oo turki ah oo lagu dilay dalka suuriya
February 28, 2020 Duceysane904
Ugu yaraan 29 askari oo Turkish ah ayaa lagu diley tiro kalana waa ay ku dhaawacmeen kadib markii diyaaradaha dagaalka ee dowlada Syria ay duqeeyeen gobolka Waqooyi Bari Syria ee Idlib. Tirada dhimashada ee soo gaartay ciidamada Turkiyiinta ayaa ah tii ugu badneyd ee hal maalin ay soo gaarto tan iyo markii kumanaan askar Turkish […]
Donald trumb oo ka bad baaday duufaantii xilka qaadista ahayd
February 6, 2020 Duceysane876
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si dirqi ah uga badbaaday xil ka qaadis ay damacsanayaayeen inay ku sameeyaan Xisbiga Dimoqraadiga, kaddib markii mooshin ay ka keeneen. Donald Trump ayaa lagu waayay wax dambi ah, iyadoo 52 cod ay u codeeyeen in aanu wax dambi ah gelin, halka 48 cod ay u codeeyeen inuu dambi galay, […]
Madaxwaynihii hore ee kenya oo geeriyooday
February 4, 2020 Duceysane544
Madaxweynihii hore ee dalka Kenya Daniel Arab Moi ayaa saaka subaxdii hore ku geeriyooday magaalada Nairobi, sida uu xaqiijiyay Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. Daniel Arab Moi oo ahaa 94 sano jir ayaa soo xukumayay dalka Kenya 24 sano, isagoo xukunka ka dagay sanadkii 2002. Bilihii la soo dhaafay ayaa la sheegay inuu xanuunsanaa, waxaana […]
RW dalka Qatar oo is casilay iyo Amiirka oo RW cusub magacaabay
January 28, 2020 Duceysane571
Ra’iisul Wasaarihii dalka Qatar Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani ayaa iska casilay xilkii Ra’iisul Wasaarenimo ee dalkaas sida ay shaacisay wakaalada wararka ee dalka Qatar. Amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ayaa aqbalay is casilaada Sheikh Abdullah Bin Naser oo ka mid ah qoyska xukuma dalka Qatar. Wakaalada wararka […]
Jarmalka oo ku qasban inay siiyaan shirkada microsoft aduun lacageed oo ku dhaw hal milyan oo dollar
January 26, 2020 Duceysane695
Bishii Janaayo 14, Microsoft ayaa joojisay taageerida dheeriga ee ay siin jirtay Windows 7, taasoo la micno ah in ganacsatada iyo macaamiisha Dugsiyadda Waxbarashadda ee ku dhegan isticmaalka Barnaamijkan Window7 ee duuga ah, ay tahay inay bixiyaan lacagaha cusboonaysiinta dhanka amniga ee afka qalad lagu yiardo (ESUs). Mid ka mid ah adeegsadayaashan ku qasban in […]
Amiirka Qatar oo booqasho lama filaan ah ku tagay Iiraan
January 12, 2020 Duceysane605
Amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ayaa maanta socdaal lama filaan ah ku tagay magaalada Tehran ee caasimada, si uu wada hadal ula yeesho Mas’uuliyiinta sar sare ee dalkaa uu ka mid yahay Madaxweyne Hassan Rouhani. Booqashada maanta oo Axad ah ayaa timid xilli xiisado kacsanaan ah ay ka taagan Khaliijka […]
Geeridii suldaan qaboos kadib cumaan oo suldaan kale loo dhaariyay
January 11, 2020 Duceysane573
Boqortooyada Cumaan ayaa yeelatay Suldaan cusub oo hoggaamin doona, kaddib geeridii Suldaankii dalkaas xukumayay mudada 50-ka sano Suldaan Qaboos Bin Saciid. Haitham bin Tariq al-Said oo ahaa Wasiirka Dhaqanka ayaa loo dhaariyay inuu noqdo Hoggaamiyaha cusub ee Cumaan, isagoo ay ilmo adeer yihiin Suldaanka geeriyooday. “Haitham bin Tariq waxaa loo dhaariyay inuu noqdo suldaanka cusub […]
Shilkii diyaarada ukraine ee lagu hoobtay oo iiraan jalaafo cusub loogu qooli rabo
January 10, 2020 Duceysane740
Warbaahinta Maraykanka ayaa daabacay in diyaaradii ku dhacday meel ku dhow magaalada Tehran ayna ku dhinteen dhammaan dadkii saarnaa oo gaarayay 176ruux ay si qaldan u soo rideen ciidamada Iran. Saraakiil Maraykan ah ayaa u sheegay CBS in ay rumeysan yihiin in diyaarada oo nooceedu ahaa Boeing 737-800 uu ku dhacay gantaal. Dowlada Ukraine ayaa […]